हामी गणतन्त्र सफल पार्न सत्तामा गएकै होइन : दिलनाथ गिरी | Interview | Image Khabar
होमपेज / Interview / हामी गणतन्त्र सफल पार्न सत्तामा गएकै होइन : दिलनाथ गिरी
हामी गणतन्त्र सफल पार्न सत्तामा गएकै होइन : दिलनाथ गिरी | Published: November 2, 2015 | सोमबार 16 कार्तिक, 2072 | 8:27 PM | Viewed: 4022 times
राप्रपा नेपालका प्रमुख सचेतक दिलनाथ गिरीले आफूहरु गणतन्त्रको संस्थागत विकास गर्न तथा गणतन्त्रलाई सफल पार्न सत्तामा गएको होइन भन्ने प्रष्ट पारेका छन् । उनले राजतन्त्रकै समयमा मुलुकले उल्लेख्य विकास हासिल गरेको जिकिर गर्दै प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र र गणतन्त्रको शासनकालमा पञ्चायतकालिन विकासलाई नै बेचेर खाएको दाबी गरेका छन् । राप्रपा नेपाल आफ्ना एजेण्डामा अडिग रहेको प्रष्ट पार्दै उनले कसैलाई पनि भ्रममा नबस्न आग्रह गरेका छन् । प्रस्तुत छ, मुलुकको समसामयिक राजनीतिक परिस्थिती र भावी रणनीतिका बारेमा उनीसँग ईमेजखबर डट कमका लागि ठाकुर बेलबासे र सुदर्शन आचार्यले गरेको कुराकानी :
संविधान कार्यान्वयनको चुनौतिपूर्ण घडीमा राप्रपा नेपाल पनि सरकारमा सहभागी भएको छ, मधेस आन्दोलन, आपूर्तिमा व्यवधानजस्तो समस्यामा मुलुक जेलिइरहेको समयमा आफ्नो पार्टी सरकारमा सहभागी हुँदा कस्तो महसुस भइरहेको छ ?
निश्चय नै मुलुक जटिल परिस्थितीमा छ । हामीले सरकारमा सहभागी हुनुअघि ठूला तीन दललाई तपाईहरु मिलेर सरकार गठन गर्नुहोस् भनेका थियौं । निकै लामो समयको प्रतिक्षापछि मुलुकमा संविधान आएको छ । त्यो संविधान निर्माणमात्र भएको छ, कार्यान्वयनको प्रक्रिया बाँकी नै छ । अर्कोतिर मधेस आन्दोलन जारी छ । भारतको अघोषित नाकाबन्दीका कारण नेपालको जनजीवन प्रभावित भइरहेको छ । गत वैशाखको विनाशकारी भूकम्पका कारण थिलथिलो भएको मुलुकमा समस्याको चाङ लागेको छ । यी सबै चुनौती सामना गर्नका लागि प्रमुख तीन दल मिलेर सरकार बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो आग्रह थियो । हामीले सत्तामा जाने सोच नै बनाएका थिएनौं । हामी जिम्मेवार प्रतिपक्षमा बस्न चाहन्थ्यौं । तीन ठूला दल मिलेर सरकार बनाएको अवस्थामा हामी जिम्मेवार प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गरेर बस्छौं भनेकै थियौं ।
तीन ठूला दलसँग सरकारमा सहभागी हुँदा आफ्नो औचित्य कम हुन्छ भनेर प्रतिपक्षमा बस्न खोज्नुभएको थियो ?
मुलुकका सामू देखिएका यावत समस्या समाधानका लागि ठूला दलहरु एकठाउँमा बस्न जरुरी थियो । प्रमुख दलहरुले हामीलाई समेत सरकारमा आउन आग्रह गरेका थिए । संसदमा रहेका सबै दलको सहमतिमा सरकार गठन गरौं भनेर कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला, एमाले अध्यक्ष केपी ओली र एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालजीले कुरा राख्नुभयो । तर पनि हामी प्रतिपक्षी भूमिकामै बस्ने तयारीमा थियौं । यसबीच नेपाली कांग्रेस सरकारमा नगएपछि हामी सरकारमा गएका हौं ।
कांग्रेसको विकल्पका रुपमा मात्र तपाईहरुले आफ्नो भूमिका रोज्नु भएको हो ?
कुनै पनि ठूला दलले प्रतिपक्षमा बस्ने इच्छा राखेको खण्डमा सरकारमा जाने कि नजाने भन्ने विषयमा हामी सोच्न सक्छौं, तर हालका लागि प्रमुख तीन दल नै सरकारमा जान आवश्यक छ भन्ने हाम्रो मान्यता थियो । एमाले नेतृत्वको सरकारमा जाने सवालमा नेपाली कांग्रेस इच्छुक नभएको भन्ने बुझिएपछि नेकपा एमाले र एनेकपा माओवादीको आग्रहमा हामी सरकारमा सहभागी भएका हौं ।
तीन दलमध्ये कुनै एक दल प्रतिपक्षमा बसेको अवस्थामा तपाईहरु सरकारमा जाने, तीनवटै ठूला दल सरकारमा गएको अवस्थामा आफू प्रतिपक्षमा बस्ने भन्ने निर्णयको उद्देश्य के थियो ?
प्रतिपक्षमा बसेर पनि मुलुकमा देखिएको जटिल परिस्थितीलाई सम्बोधन गर्ने दिशामा आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो सोच हो । यदि अर्को कुनै ठूलो दल प्रतिपक्षमा बस्ने हो भने हामी सरकारमा गएर पनि त्यही लक्ष्य प्राप्तिमा भूमिका निर्वाह गर्न सक्छौं भन्ने नै हो ।
यसको अर्थ नेपाली कांग्रेस अहिले प्रतिपक्षमा बसेर पनि ठिकै गरिरहेको छ ?
कांग्रेस प्रतिपक्षमा बस्नुलाई म व्यक्तिगत रुपमा त ठिक भन्दिनँ । किनकि अहिले यतिधेरै समस्या छन्, तिनलाई सम्बोधन गर्नका लागि तीन ठूला दल एकठाउँमै बस्नुपर्ने अवस्था छ । तर विविध कारणबाट नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्षमा रह्यो । नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्षमा गएर पनि मुलुकमा देखिएका विविध समस्या समाधानमा उसले आफ्नो भूमिका रहने प्रष्ट पारिसकेका कारण त्यति ठूलो समस्या नहोला भन्नेमा म आशावादी छु । अहिले सरकारमा जानेहरुले पनि त्यो लक्ष्य प्राप्तिका लागि यथाशीघ्र जनताले तत्काल अनुभूति गर्नेखालको कार्यक्रम राष्ट्रको नाममा घोषणा गर्नुपर्छ ।
तर सत्ता पक्षले नेपाली कांग्रेसलाई कुनै स्थान दिएन नि ? भोलिका दिनमा राजनीतिक ध्रुवीकरण बढ्ने खतराको संकेत यो होइन र ?
कांग्रेसलाई कुनै स्थान नै नदिने भन्ने कुरा थिएन । उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको नेतृत्व एमाओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले गरिरहनु भएको छ । उहाँले अन्तिम समयसम्म पनि कांग्रेसलाई भूमिका दिनका लागि प्रयास गरिरहनु भयो । कांग्रेसले राष्ट्रपति पद माग गरेको थियो । सभामुख–उपसभामुख पदका लागि निर्वाचन हुँदा कांग्रेसले सदासयता देखाएर सहयोग गरेकै हो । सोही आधारमा कांग्रेसलाई राष्ट्रपति पद दिने हो भने ऊ पनि सरकारमा आउनुपर्छ भन्ने सत्ता पक्षको भनाई थियो । उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको अध्यक्षको हैसियतले दाहालजीले कांग्रेसलाई सरकारमा सहभागी हुन आग्रह पनि गर्नुभएकै हो । सरकारमा कांग्रेस सहभागी हुने अवस्थामा उसलाई राष्ट्रपति पद दिनका लागि सत्ता पक्ष तयार भएकै हो । तर कांग्रेसले त्यो प्रस्ताव अस्वीकार ग¥यो ।
संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनमा संवैधानिक राजतन्त्र, हिन्दु राष्ट्र घोषणालाई मूख्य एजेण्डा बनाएर तपाईहरु जनतामा जानुभयो तर अहिले गणतान्त्रिक शासनसत्तामा हिस्सेदार बन्नु भएको छ, राप्रपा नेपालले आफ्ना एजेण्डालाई त्यागेको हो ?
जनताको बीचमा चासो बनेको विषयलाई तपाईले उठाइदिनु भएकोमा तपाईलाई धन्यवाद छ । साथै म आग्रह गर्न चाहन्छु कि हामीले हाम्रो एजेण्डालाई छाडेका छैनौं । यहीँनेर केही असमझदारी म देख्दैछु । संविधानले एउटा प्रष्ट बाटो लिएको छ । संविधानसभामा राप्रपा नेपालको उपस्थिती जम्मा २५ सीटमात्र हो । त्यसबाहेक सबै गणतन्त्रका पक्षपाती नै हुन् । २५ सीट भएको पार्टीले ६०१ सीट भएको संविधानसभामा संवैधानिक राजतन्त्र, हिन्दु राष्ट्रका एजेण्डालाई स्थापित गर्न सक्ने कुरै भएन ।
तपाईले यसो भन्दैगर्दा उपराष्ट्रपति पदमा एमाओवादीका उम्मेदवारलाई राप्रपा नेपालको प्रमुख सचेतकका हैसियतले तपाईले समर्थन गर्दा एजेण्डाको हिसाबले तपाईको पार्टीका २५ सांसदको हैसियत पनि गुमाउनु भयो नि ? अब तपाई लगायत तपाईको पार्टीका सांसदले कुन नैतिकताले हिन्दु राष्ट्र र संवैधानिक राजतन्त्रको कुरा गर्ने ?
हामी २५ जनाको हैसियत गुमेको होइन कि हामीले त ६०१ जनाको हैसियत पो प्राप्त गरेका छौं जस्तो मलाई लाग्छ । किनकि राप्रपा नेपाललाई छुँदाखेरी नै जात जान्छ भन्नेजस्तो अवस्थामा रहेका दलहरुले उपराष्ट्रपति पदमा हाम्रो समर्थन खोज्नु भनेको हाम्रो एजेण्डालाई पनि उनीहरुले स्वीकारेको भन्ने बुझिदैंन र ?
संविधानले धर्मनिरपेक्षतालाई अनुमोदन गरिसकेको छ र गणतन्त्रलाई संस्थागत गरिसकेको छ, यस्तो अवस्थामा तपाईको दाबीको कुनै अर्थ छ र ?
त्यसो त, २०१७ सालको संविधानले दलमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो । त्यतिबेला कुनै दलको औचित्य थिएन । तर २०४६ सालमा राजनीतिक परिवर्तन त भयो । संविधानले प्रतिबन्ध लगाएका दलहरु त जीवितै रहेछन् नि । त्यसैले अहिले हामीलाई त्यो ढंगले पनि हेरौं न ।
तपाईले पुष्पकमल दाहाल चाहीँ कमल थापाको पथमा हिँड्दैछन् भन्न खोज्नु भएको हो र ?
पुष्पकमल दाहाल कमल थापाको पथमा भन्दा पनि राष्ट्रको आवश्यकता अनुसार मुलुकले पथ निर्धारण गर्नुपर्दछ ।
तपाईहरुका लागि त राजसंस्था आवश्यक छ नि ?
हामीले गणतन्त्रको विकल्पमा संवैधानिक राजतन्त्र उपयुक्त विकल्प हो भनेका छौं । हामी धेरै अगाडी पनि नजाऔं, राजाको नेतृत्वमा शासनसत्ता रहँदा पञ्चायतकाल कै कुरा गर्ने हो भने यो मुलुकले ठूलो फड्को मारेको थियो । मुलुकलाई समृद्ध राष्ट्र बनाउने बाटोमा राजतन्त्र हिँडेको थियो । पूर्व–पश्चिम राजमार्ग, मुलुकी ऐन, क्रान्तिकारी भूमिसुधार, कोदारी राजमार्गलगायत उद्योगधन्दाहरु मुलुकमा जति स्थापित भए, ती सब राजतन्त्रकै नेतृत्वमा भएका हुन् ।
यही मुलुक हो, जसले कुनै बेला विदेशमा खाद्यान्न निर्यात गर्दथ्यो । धानचामल कम्पनीको नामबाट दक्षिण कोरियासम्म अन्न पठाउँथ्यौं हामी । आज त्यही देश पञ्चायतीकालको त्यो आर्जनलाई बिक्री गर्दै–गर्दै यति टाँट पल्टिसकेको छ कि आज खाद्यान्नका लागि हामी विदेशमा निर्भर हुनुपरिरहेको छ । हाम्रा युवाहरु विदेशमा पलायन हुनुपर्ने अवस्था ल्याइयो । यो कसले गरेको हो ? लोकतन्त्रको, गणतन्त्रको औचित्य त्यही हो त ?
एकीकृत माओवादी र राप्रपा नेपालको गठजोडचाहीँ पुष्पकमल दाहाल बिस्तारै राजतन्त्रप्रति नरम बन्दै गरेको उदाहरणका रुपमा लिँदा हुन्छ ?
राजतन्त्रभन्दा उत्तम गणतन्त्र हो भनेर उहाँहरुले साबित गर्न सक्नुभएन भने राजतन्त्र नै उत्तम हो भनेर उहाँहरुले आत्मालोचना गर्नु उपलब्धिमुलक हुनेछ । त्यो अवस्थामा उहाँहरु नेपाली जनताप्रति इमानदार भएको ठहरिने छ र नेपाली जनताले विगतमा उहाँहरुबाट भएका सम्पूर्ण गल्तीलाई माफी दिन पनि सक्नेछन् ।
पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र, कमल थापा र पुष्पकमल दाहालको बेलाबखत भेटघाट भइरहन्छ भन्ने हल्ला पनि चलिरहेको छ नि, सत्य हो ?
राजाको इतिहास हेर्ने हो भने महेन्द्र मल्लदेखि कै इतिहासलाई हामीले बुझ्नु पर्छ । त्यो बेलामा बसन्तपुरमा रहेको दरबारबाट काठमाडौं उपत्यकामा सबैको घरमा चुलो बल्यो कि बलेन, घरको छानोमा धुँवा आयो कि आएन भनेर हेरेर सबैको घरमा चुलो बलेपछि मात्र राजाले खाना खाने गरेको कुरा इतिहासमा हामी पाउँछौं । त्यो परम्पराको विकासमा नेपालको राजधर्म चल्दै आएको हो । त्यस्तो राजसंस्थालाई अनायासै अवैधानिक तवरले जसरी हटाइयो, त्यसको परिणामस्वरुप देश आज अस्तव्यस्त भएको छ । यस्तो स्थितीको गणतन्त्रलाई नेपाली जनताले कसरी बुझ्ने ? राजाको शासनमा मुलुकले विकास र औद्योगिक रुपमा देश विदेशमा जसरी फड्को मारेको थियो, त्यो व्यवस्था नै ठिक रहेछ भनेर नेपाली जनताले भनेको अवस्थामा के गलत हुन्छ ?
जुन शासनव्यवस्था अन्तर्गत तपाईहरु शासनसत्तामा हिस्सेदार बन्नुभएको छ, त्यही शासनव्यवस्थाको आलोचना गर्नु, राजतन्त्रको वकालत गर्नु न्यायसंगत हो र ?
मुलुकले एउटा प्रणालीको विकासमा फड्को मार्नै सकेन । हामी प्रणालीको नाममा अल्मलिएको अवस्था छ । हामीभन्दा बाहेकका त सबै गणतन्त्रवादी नै हुन् नि । उहाँहरुले छलाङ मार्नु प¥यो नि । उहाँहरुले गरेर देखाए भइहाल्यो नि ।
यसको अर्थ गणतन्त्रलाई सफल पार्न, यसको संस्थागत विकास गर्न तपाईहरु सत्तामा जानुभएको होइन ?
हामी गणतन्त्र सफल पार्न सत्तामा गएकै होइन, गणतन्त्रबाट त्यो गन्तब्यमा पुग्नै सकिदैंन भन्ने हाम्रो मान्यता हो । त्यहाँ ठूल्ठूला खाडल छन्, खाडलमा जाकिने ठाउँमा जान हामी कसरी सहमत हुन सक्छौं ? ठिक छ, तपाईहरुले बहुमतले निर्णय गर्नुभयो, हामी त्यसलाई आलोचनात्मक रुपमा सम्मान गर्छौं, तर यही संविधानभित्रबाट जनतालाई यो गलत बाटो हो भन्ने बोध गराएर जनताको विश्वास र समर्थनका साथ दुई तिहाई बहुमतले हामी यो शासनव्यवस्थालाई परिवर्तन गर्छौं । लोकातान्त्रिक विधिबाटै हामी परिवर्तन ल्याउँछौं । हत्या, हिंसा, बन्द, हड्ताल गरेर होइन । राप्रपा नेपाल शान्तिवादी, सत्यवादी र राष्ट्रवादी हो ।
गणतन्त्रमा गएर फाइदा लिने अनि गणतन्त्रलाई नै घात गर्ने कुरा नैतिकताले दिन्छ ?
२०४७ सालको संविधानलाई नेकपा एमालेले पूर्ण समर्थन गरेको हो र ? उसले आलोचनात्मक समर्थन गरेको होइन ? त्यही संविधान अनुसार ऊ पनि त सरकारमा गएकै हो, सरकारको नेतृत्व पनि गरेकै हो ।
तपाईको पार्टी अध्यक्ष अहिले उपप्रधानमन्त्रीसहित परराष्ट्रमन्त्रीको जिम्मेवारी वहन गरिरहनु भएको छ, भारतको अघोषित नाकाबन्दीका कारण मुलुक यत्रो समस्यामा रुमल्लिएको छ, उहाँले कुनै निकास निकाल्न सक्नु भएन नि ?
उहाँले त भरपुर प्रयास गर्नुभएकै हो । भारतीय नेतासँग उहाँले छलफल गरिसक्नु भएको छ, भारतीय पक्षले नाकाबन्दी खोल्ने आश्वासन पनि दिएको हो । तर पनि नाकाबन्दी हटेको छैन । भारतमा हिन्दुवादी दलकै नेतृत्वमा सरकार छ । हिन्दु धर्मदर्शनको कुरा गर्ने हो भने जनतालाई दुःख दिने कुरा हिन्दु धर्ममा हुँदैन । जानेर वा नजानेर किन उहाँहरुले नाकाबन्दी गरेर नेपाली जनतालाई दुःख दिने काम गरिरहनु भएको छ भन्नेमा हामीलाई आश्चर्य लागिरहेको छ । तर हिन्दु दर्शनमा विश्वास गर्नेले यस प्रकारको अमानवीय कार्यमा विश्वास गर्दैन ।
भारतीय सरकारबाट यस्तो काम होला भन्नेमा मलाई विश्वास छैन । त्यहाँको कर्मचारीतन्त्रले जुन भ्रम पारेर यस्तो काम गरिरहेको छ, त्यो भ्रम चाँडै नै अन्त्य हुन्छ भन्नेमा म विश्वस्त छु ।
राप्रपा नेपाल र भारतको सत्तारुढ दलबीच राम्रै सम्बन्ध छ भन्ने चर्चा धेरैअघि देखि चलेको हो, दुबैले हिन्दु धर्मलाई बढी महत्व दिन्छन्, गणतन्त्रलाई सफल पार्न सत्तामा गएको होइन भनेर तपाईले अघि भन्नुभयो, कतै भारतको सत्तारुढ दल र तपाईहरुको स्वार्थ एउटै भएको त होइन ?
जनतालाई दुःख दिने काम राप्रपा नेपालले गर्दैन । नेपाली जनतालाई प्रताडित गर्ने काम किन भइरहेको छ भन्ने हाम्रो पनि खोजीको विषय हो । मधेसवादी दलहरुको संरक्षणका लागि मात्र नाकाबन्दी भइरहेको हो भन्ने हामी मान्न तयार छैनौं । यसभित्रको रहस्य के हो ? यो बुझेर सार्वजनिक हुन जरुरी छ ।